အတတ်ပညာ China 16 Bar PP Compression Fitting , Tube Compression Reduction Tee for Plastic Pipe Connect ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
1. အမည်- တီရှပ်ကို ကာရံထားသည်။
2. အရွယ်အစား: 20-110mm
3. စံသတ်မှတ်ချက်- DM174၊ BS 6920၊ W270:KTW
4. O ring gasket- အစားအသောက်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် NBR အထူး elastomeric acylonitrile ရော်ဘာ။
5. အလုပ်ဖိအား- PN16 သို့မဟုတ် PN10
PP တီရှပ်ကို လျှော့ချခြင်း။
DIN 8076-3၊ISO 14236၊ ISO13460
ကတ္တားသေတ္တာ + ပလပ်စတစ်အိတ်
ပလပ်စတစ်ပိုက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Tube လျှော့ချခြင်း Compression Tee 16 ဘား
PP compression fittings များသည် ဖိအားများလွန်းသော၊ ဆည်မြောင်းနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များအောက်တွင် အရည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုမျိုးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။၎င်းတို့သည် PELD၊ PEHD၊ PE40၊ PE80 နှင့် PE100 ပိုက်များအားလုံးနှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အလုပ်ဖိအားဆိုင်ရာ PP ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းသည် ISO14236 သို့မဟုတ် DIN8076 နှင့် ကိုက်ညီနိုင်ပြီး၊ thread များ၏ စံနှုန်းသည် ISO7၊ DIN EN 10226၊ ASME B1.20 သို့မဟုတ် BS 21 တို့ဖြစ်သည်။ အချင်း 20 မှ PP compression fittings ၏ အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအား၊ 63 မှ PN16 နှင့် ကိုက်ညီနိုင်ပြီး PN10 ကို 75 မှ 110၊ 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသော အချင်းအတွက် ကိုက်ညီနိုင်သည်။
ကပ္ပလီကုန်းနှီးများကို PE တွင် ဘေးထွက်အထွက်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို ကတ်တလောက်တွင်တွေ့နိုင်သည့် အရွယ်အစား အများအပြားဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ကုပ်ကုန်းနှီးများသည် အစားအစာအရည်များကို သယ်ဆောင်ရန် သင့်လျော်သောကြောင့် ၎င်း၏ပစ္စည်းများသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
၂၅*၂၀*၂၅ 20 16 60
၃၂*၂၀*၃၂ 25 16 40
၃၂*၂၅*၃၂ 25 16 40
၄၀*၂၅*၄၀ 32 16 20
၄၀*၃၂*၄၀ 32 16 20
၅၀*၂၅*၅၀ 40 16 12
၅၀*၃၂*၅၀ 40 16 12
၅၀*၄၀*၅၀ 40 16 12
၆၃*၃၂*၆၃ 50 16 7
၆၃*၄၀*၆၃ 50 16 7
၆၃*၅၀*၆၃ 50 16 7
၇၅*၅၀*၇၅ 65 10 6
၇၅*၆၃*၇၅ 65 10 6
၁၁၀*၉၀*၁၁၀ ၁၀၀ 10 3
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းများ ရေပေးဝေရေးအတွက် ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းခြင်း။
လူနေဧရိယာ သို့မဟုတ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၏ မြေအောက်ရေပေးဝေရေးစနစ်အတွက် ပိုက်လိုင်းများ
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ရေသွင်းခြင်းအတွက် ပိုက်ကွန်ရက်များ
1. အရည်အသွေးမြင့်&စက်မှုလုပ်ငန်း ဦးဆောင်စျေးနှုန်း
2. အမှာစာ အမြန်လုပ်ဆောင်ပြီး အချိန်မှန်ပေးပို့ခြင်း။
3.အသုံးပြုမှုသက်တမ်းသည် အနည်းဆုံး5နှစ်အထိ အလွန်ရှည်သည်။
6. အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု
7. လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
8. ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ အစွန်းအထင်းမရှိ၊ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရနိုင်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊
9. ခေတ်မီနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ကျွမ်းကျင်သောလက်စွဲစာအုပ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
10. ပေါ့ပါးပြီး သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး လုပ်အားချွေတာရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ပလပ်စတစ်ပြွန်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM လုပ်ငန်းကို လက်ခံပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ရပ်တန့်ထားသောအဆို့ရှင်၊ ပိုက်အဆုံးအဖုံး၊ သာတူညီမျှ/လျော့ချပေးသည့် တီရှပ်၊ ရေပူရေအေးဘောလုံးအဆို့ရှင်၊ ပြည်ထောင်စုဘောလုံးအဆို့ရှင်၊ ချည်တံတောင်ဆစ် (ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုဖြင့်) စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
3. အညီအညွတ် ချိတ်ဆက်မှုများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
4. အချို့သောပိုက်များအတွက် သင့်အား အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်သင့်အားကြိုဆိုပါသည်။သင်၏လာရောက်လည်ပတ်မှုကို အလွန်တန်ဖိုးထားပါမည်။
6. မင်းကိုကူညီရတာ ငါဝမ်းသာတယ်။
Hdpe Compression Fittings ထုတ်လုပ်သူများ
ဖေ Compression Fittings
Quick Connect Pipe PP Compression Fitting Male...
Plastic Compression Fitting Pipe Connectors Mal...
အမြန်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ PP ရေပိုက်ဆက်ခံပစ္စည်းများ ပလပ်စတစ်အင်...
ISO ခွင့်ပြုထားသော PP Compression Fitting ၊ Polypropy...
ဆည်မြောင်း 20 – 110 MM High Density PP Fi...
ရေပေးဝေရေး Pvc Ball Valve / Butterfly Valve W...